Umhambisi wamanzi → Amaziko oluntu • Iiofisi • Iizikhululo zeenqwelo moya • IiBhanki • Iposi
Ngaba uyayifuna into yokuhambisa amanzi kwiindawo zikawonke-wonke, eofisini, kwisikhululo senqwelomoya, ebhankini? Inkampani yaseWater Point ibonelela izihluzi zamanzi ezingenabhotile, baseliUmthombo weenkokheli zehlabathi kumzi mveliso, apho sisasaza yedwa ePoland.
Elinye lawona macandelo abalulekileyo omzimba womntu amanzi. Ukufakelwa amanzi ngokufanelekileyo komzimba kunye nokunxanelwa ukomelela kunempembelelo efanelekileyo kwimpilo nakuzo zonke iinkqubo zobomi emizimbeni yethu.
Ibango lamanzi lenyuka ngakumbi ehlotyeni, xa siziva sinxaniwe ngakumbi xa kushushu. Ke ngoko, isisombululo esifanelekileyo yimithombo, imithombo kunye nokusasaza amanzi okusela okufumaneka ngokuthe gabalala kwiindawo zikawonkewonke.
Ezi zixhobo zibonelela ngamanzi acocekileyo nasempilweni. Ndiyabulela i-faucets ebekwe kuyo, wonke umntu angasela amanzi amnandi kwaye amnandi okanye azalise ibhotile yakhe okanye ibhotile yamanzi ngayo. Izinto zokuhambisa amanzi okusela namhlanje zenzelwe ngendlela yokuba kungabi ngabantu abadala kuphela nabantwana, kodwa nabantu abadala banokuzisebenzisa ngokulula.
Imithombo yokusela yamanzi inika amanzi ahlangabezana nayo yonke imigangatho eyimfuneko, ke kukhuselekile ukusela kwaye, ukongeza, kunambitheka kakhulu.
Iindawo zokuhambisa amanzi okusela zinokubekwa kwiindawo zikawonkewonke, kwiivenkile ezinkulu, kwizikhululo zeenqwelo moya, ezipakini nasezemidlalo, nakwiinkampani, ezikolweni nasezibhedlele.
Ezi zixhobo zenza ukuba abantu bahlala kwezi ndawo baziva bekhululekile kwaye banokuthi bayinyamekele impilo yabo ngokusela amanzi acocekileyo namatsha.
Izitshizi zamanzi okusela kufuneka zifumaneke naphi na apho sichitha ixesha elininzi khona, kwaye asisoloko sinethuba lokuthenga amanzi amatsha okanye esinye isiphuzo. Izixhobo zokuhambisa amanzi okusela aziyiyo kuphela umthombo wamanzi amnandi kwaye amnandi, kodwa kwakhona, ngenxa yendlela yabo yokuyila kunye neyangoku, ziyinto eyongezelelweyo enefuthe ekuhonjisweni kwezithuba zoluntu.
Izikhululo zamanzi okusela zinokubonelela ngamanzi ngokufanelekileyo, ngelixa kunciphisa ukubonelelwa kwamanzi kunye neendleko zokuhambisa, kwaye zibonelele ngengxoxo yokusingqongileyo ngokunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kweebhotile zeplasitiki kunye nokunciphisa imveliso yenkunkuma.
Ukusela amanzi okuhambisa amanzi kunye nemithombo iyanceda ukukhuthaza indlela yokuphila esempilweni ngokwenza umkhwa wokusela amanzi emvelo amdaka kuneziselo ezinencasa.
Ukubonelela ngesixa esingenamkhawulo samanzi acwengileyo ekhristali, afumaneka kuyo nayiphi na indawo yoluntu ngexesha lewotshi, inyusa indlela yokuziphatha kunye nokuqonda ngokwasentlalweni kuluntu, kwaye kunciphisa kakhulu iindleko ezinxulumene nokulahlwa kwenkunkuma enkulu kwisixeko.
Ukusela amanzi okusela, imithombo kunye nemithombo kukonga ixesha, indawo kunye nemali ebikade ichithwa ekugcineni amanzi asebhotileni.
Izixhobo zokuhambisa amanzi okusela zenziwa ngezinto zangoku, ukuqinisekisa ukuqina kwexesha elide kunye neendleko zokusebenza eziphantsi.
Uyilo olufanelekileyo lwesixhobo luqinisekisa ukuba amanzi anikezelweyo anomgangatho ophezulu, ukutsha kunye nokunambitheka okumnandi, kwaye, kunjalo, kukhuselekile kwizinto eziphilayo.
izixhobo zokuhambisa amanzi ezingezi-silindaamanzi acocekileyo empompoUkuhanjiswa kwamanzi kwisikhululo seenqwelomoyaisitshisi samanzi sebhankiisitshisi samanzi eofisiniindawo yokuhambisa amanzi kwiiofisiokusela amanzi okusela kwiposiamanzi okuhambisa amanzi entwasahloboamanzi eekhabhoniamanzi ashushungqo kwimpompoamanzi eeofisiamanzi kwisikhululo seenqwelomoyaamanzi eofisiniamanzi empompo asempilweniamanzi abandayoamanzi entwasahlobo ukulungiselela amaziko oluntu